Tantara an-tsary – …ho soratsoratra manainga fanahy
Kirikou et la sorcière, narindran’i Michel Ocelot
Tantara an-tsary Posté par BerïnsonPosted on 2011-05-18 17:14
Tantara mahafinaritra avy ao Afrika andrefana ny tantaran’i Kirikou ary narindran’i Michel Ocelot ho sary mihetsika. Tantarana ankizilahy kely iray; ny kely eto dia kely ara-batana no kely amin’ny taona. Tsy araka ny maha-kely azy anefa fa tena mafy loha koa i Kirikou. Ripak’i Karaba mpamosavy ny lehilahy rehetra teo an-tanànany ary ilay dadatoany izay hany sisa tavela aza dia eny an-dalana handeha hiady amin’i Karaba ny andro nahaterahany io.
Tantara mahatsikaiky izy ity satria mirakitra sehon-javatra tsy fahita andavanandro. Minitra vitsy monja taorian’ny nivoahany ny kibon-dreniny dia sady efa mahay miteny sy mametraka fanontaniana be dia be izy ary afaka nihazakazaka nanenjika ny dadatoany hanohitra an’i Karaba sahady avy eo. Tsy misy rano sy sakafo intsony mantsy ny tanànany ary ny lehilahy dia natelin’i Karaba avokoa, izay raha ny marina dia novainy ho masinina kely ho miaramilany saingy afaka niverina ho olombelona toy ny teo aloha rehefa afak’i Kirikou ny tsilo tao an-damosin’i Karaba ka lasa tsara fanahy izy.
Tantara mampisaina koa anefa ity tantara ity satria manokatra ny eritreritra hahita ny tsy hitan’ny maso. Araky ny tantara dia ilay tsilo miraikitra ao amin’ny lamosin’i Karaba no nahatonga azy ho kirìna sy ratsy fanahy. Soa ihany fa mahira-tsaina sy kely i Kirikou ka mora taminy ny nanala am-pitaka ilay tsilo. Nanjary tovolahy tsara tarehy sy tomady izy rehefa nahazo oroka iray avy tamin’i Karaba. Ny fiafaran’ny tantara? Nivady izy roa ary niverina tamin’ny laoniny ny zavatra rehetra.
Tantara an-tsary Posté par BerïnsonPosted on 2011-01-30 11:06
Roméo et Juliette dia noforonin’i Shakespeare ny faramparan’ny taonjato faha-16. Tantara niafara tamin’ny fahafatesan’ireo tanora roa mifankatia. Tantaram-pitiavana mbola ankafizin’ny tanora maro hatramin’izao na dia efa betsaka aza ireo nosoratana sy nolalaovina, tsy voatery ho fitiavana mandika lalàna, tsy voatery ho fitiavana hamoizana ny aina, tantara tsara lavitra sy misy azo akàna lesona mifanaraka amin’ny fiainana andavanandro ankehitriny.
Raha ny atolotry ny Festival du Film eto Göteborg izay nanomboka ny 28 janoary teo hatramin’ny 7 febroary izao dia misy vitsivitsy azo fantenana raha hoe tantaran’olon-droa no resahina.
Angèle et Tony (Frantsa), narindran’i Alix Delaporte, dia horonan-tsary mitantara ny fiainana andavanandron’ i Angèle sy Tony, olona anankiroa samy hafa, samy manana ny lasany nefa mifanintona sy mifamatotra.
Monica & David (Amerika), narindran’i Alexandra Codina. Tantaram-pitiavana tsy manam-paharoa, adiny iray mitantara ny herintaona amin’ny fiainan’i Monica sy David.
Chico & Rita (Espaina), narindran’i Fernando Trueba sy Javier Mariscal. Chico sy Rita dia mpitendry zava-maneno sy mpihira nifanojo ka nifankatia kanefa nosembanin’ny tsy fifankahazoan-dresaka.